लेखाले अख्तियारलाई साेध्याे : 'सेक्युरिटी प्रेस र वाइडबडी खरिदको छानबिन के हुँदैछ ?' - Demo Khabar
लेखा समितिकाे अख्तियारलाई पत्र
काठमाडौं, असाेज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग वाइडबडी जहाज र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको छानबिनबारे सार्वजनिक लेखा समितिले विवरण माग गरेको छ ।
वाइडबडी विमान खरिदमा लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न करिब दुई वर्ष अगाडि अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म त्यसको अनुसन्धानका विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी नभएको भन्दै लेखाले विवरण माग गरेको हो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको छानबिन पनि अख्तियारले तामेलीमा राख्न खोजेको चर्चा छ । लेखा समितिले पनि यसबारे आशंका गर्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएको छ । ‘साँच्चै तामेलीमा राखिसकेको हो कि अनुसन्धान भइरहेको हो ? अनुसन्धान भइरहेको भए प्रगति विवरण के छ ?’ लेखाले सोधेको छ ।
बिहिवार, आश्विन ८ २०७७०८:४८:३९